Malunga Nathi- Xuzhou Lena Import Export Co., Ltd.
Swing Top Ibhotile
Ibhotile yeoli yomnquma
Ibhotile yeReed Diffuser
Ubusi kunye neJam Jar
I-Xuzhou Lena Import and Export Co., Ltd., umenzi weebhotile zeglasi ezilungiselelwe e-China, uneminyaka engaphezu kwe-12 yamava ekuboneleleni izisombululo zokupakisha zeglasi.
Sibonelela ngeebhotile zokupakisha zeglasi ezahlukeneyo, ezinjengeebhotile zesiselo, iibhotile zejusi, iibhotile zobisi, iibhotile zecondiment, iibhotile zokuthambisa, iibhotile zearomatherapy, iibhotile zeoyile ezibalulekileyo, izibambi zekhandlela, iingqayi zobusi, iijam zejam, iingqayi zekofu, iingqayi zokugcina ukutya, njl. .
Sineqela elikhethekileyo loyilo elinokuyila ibhotile yokupakisha oyifunayo ngokwemibono yakho.Siyayihlonipha kwaye siyayixhasa imvelaphi kwaye sijike izimvo zakho zibe yinyani.Iya kuba yinto enomlingo enjani le.
Izinto zethu zeglasi ekrwada ziye zahlolwa ngokungqongqo umgangatho, zithobela imigangatho yelizwe kunye neyokuthumela ngaphandle, kunye nokuhlolwa kwenkxaso.Kwangaxeshanye, isebe lethu lemveliso linenkqubo epheleleyo yolawulo lwemveliso yokulawula ngokungqongqo iindleko ngelixa ulawula umgangatho ukuze ukwandise imida yakho yenzuzo.
Inkampani yethu ikwanoomatshini bokwenza umbane wokwenza ubunzulu beebhotile zeglasi.Inkqubo yethu enzulu ibandakanya i-decal, i-silk screen printing, i-hot stamping, i-frosting, i-sandblasting, i-peyinti kunye ne-electroplating, njl njl. Umyalelo we-OEM kunye ne-ODM wamkelekile, siyakuvuyela ukuyila okanye ukuvelisa iibhotile zakho zesiko, ngokufanayo kunye nombono wakho kunye nomzobo.Into esifuna ukuyenza kukubonelela ngenkonzo yokumisa enye kuyo yonke umhlobo.
Iqela lethu lokuthengisa lamazwe ngamazwe linezakhono ezibalaseleyo zokunxibelelana kwaye linokuqonda iinkxalabo zokwenyani zabathengi bethu.Emva kweminyaka yokusebenza nzima, siye saseka ubudlelwane obuhle nabathengi bethu kwaye saphumelela ukuthembela kwabo kwihlabathi.
Sigcwele ukuzithemba kwiimveliso zethu kwaye sinokubonelela ngeesampuli zasimahla zokuhlola kwakho.Iimveliso zethu zeglasi zithunyelwe kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla emhlabeni jikelele.
Wamkelekile kumzi-mveliso wethu ukuba undwendwele kwaye uthetha-thethwane.
I-Baduan Industrial Park, iSithili saseTongshan, kwisiXeko saseXuzhou, kwiPhondo laseJiangsu
Abavelisi bebhotile yesiqholo abayi-6 abaphezulu kwihlabathi liphela
Top 6 perfume ibhotile...